पहिले डलर गन्ने,अहिले बारी खन्ने पर्यटन व्यवसायीमा अदृष्य पिडा – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNepalपहिले डलर गन्ने,अहिले बारी खन्ने पर्यटन व्यवसायीमा अदृष्य पिडा
पहिले डलर गन्ने,अहिले बारी खन्ने पर्यटन व्यवसायीमा अदृष्य पिडा
पहिले पर्यटन ब्यवसायी डलर गन्ने !
अहिले पर्यटन ब्यवसायी बारी खन्ने !! (वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठी)
कस्तो समयको खेल सुन्दा रमाईलो र ठट्टा लागे पनि , यो भनाईमा पर्यटन व्यवसायीमा एक किसिमको अदृष्य पिडा झल्कीन्छ ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी फैलिएसँगै नेपालमा पनि यसको ठुलो प्रभाव परेको छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ ।
नेपाल आउने ८० प्रतिशत पर्यटक लेकसाईड आउँथे । लेकसाईड क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । चौविसै घन्टा खुल्ने लेकसाईड अहिले चौविसै घन्टा बन्द छ । कोभिडका कारण सबैभन्दा क्षति व्यहोरेको ठाउँ लेकसाईड हो । पर्यटन क्षेत्रमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको देखिन्छ । भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्ष्य गरेर करिब तीन खर्ब भन्दा बढी लगानी भएको देखिन्छ । त्यो सबै फ्रिज भएको छ । कोभिडको असर कहिलेसम्म जान्छ यसको यकिन गर्न कठिन छ । अहिले फेरि संक्रमण बढेकाले यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो अनिश्चित देखिएकाले जटिलता सिर्जना भएको छ । कोभिडको प्रकोप लम्बिने निश्चित देखिन्छ । असहजताबीच पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने सम्भावना के छ ? यो त समयले नै बताउने छ ।
सरकारको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुन नसकी कागजमा मात्रै सिमित भए पनि
नेपाल राष्ट्र बैकले कोभिड-१९ ले कस्ता ब्यापार ब्यवसाय कति प्रभावित भए भनेर वर्गीकरण गरेको छ।
अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित ।
यद्यपी सरकारले कोभिड–१९ बाट थलिएको मुलुकको पर्यटन पुनरुत्थान र दिगो पर्यटनको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने लक्ष्यसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनमा संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले प्रभावको अध्ययन गरी पर्यटन पुनरुत्थान लगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
आफ्नो परिचय सार्वजनिक गर्न नचाहने एक पर्यटन व्यवसायीको गुनासो यस्तो छ । सरोकारवालाबाट सहयोगको अपेक्षा यस्तो हुनुपर्र्छ कोरोना महामारीको असर जहिलेसम्म जान्छ त्यो बेलासम्म कम भाडा लिएर आफ्नो घरमा बसेको व्यवसायीलाई घरभाडाका कारण विस्थापित नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । घरधनी र व्यवसायीले भ्रमण वर्ष २०२०लाई लक्षित गरेर जुन संरचना बनाएका थिए । घरधनीले भाडामा लगाउने हिसाबले, व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्ने हिसाबले लगानी गरे । आज ती घरधनीले भाडा नउठेका कारणले किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । व्यवसायीले आयस्रोत नभएका कारण बैंकको ब्याज र घर भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा बैंकले व्यवसाय चलेपछि तिर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउनु पर्छ । जीवनमा यति धेरै तनाव बढिरहेको छ, जसको म व्याख्या पनि गर्न सक्दिनँ । दिमागमा नकारात्मक विचारबाहेक अरू केही आउँदैन  ऋणको ब्याज बढ्दै गएको र ब्याजको ताकेता गर्दै आउने फोनले आफूलाई तनाव दिएको मा पूरै डिप्रेसनमा गएको बताएका छन् ।
पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडलाइ सम्बन्धित निकायले ध्यान नदीए ४० हजार मजदुरको रोजगारी गुम्नुका साथै धेरै दुर्घटना हुन सक्के देखिन्छ । तर अहिले धैर्य गर्नुको विकल्प छैन विश्वलाई आकर्षित गर्न सक्ने सजिलो व्यवसाय पर्यटन हो । नेपालमा पर्यटनको भविश्य राम्रो छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि पर्यटनले सघाउन सक्छ ।